earthquake | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > earthquake
जापानमा कति चोटी भुकम्प जान्छ ?
नेपालमा २०१५को भुकम्प निकै ठूलो थियो। यसले थुप्रै जन धनमा क्षेति पुर्याएको थियो। त्यस्पस्चात नेपालमा स-साना पराकम्पाहरु गइ नै रहेका छन्। हुन पनि हामी भुकम्पको लागि सचेत हुनु पर्दछ। जापान भुकम्प गइ रहने देश हो। यहाँ दिन दिनै भुकम्प गइ रहन्छ। भुकम्प गइ रहनुको कारण जापान ४ टेक्टोनिक प्लेटको इन्टरसेक्सनमा रहेकोले हो। यी प्लेटहरु एक…
दारुमा गुडिया : आफ्नो गुड लक् चार्म आफै बनाउनुहोस
कामको खोजि वा काम परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनु हुन्छ ? यो सेमिनार हजुरहरुको लागि
के जापान, सानो बच्चा संग आउदै हुनुहुन्छ ? जापानमा सजिलै किन्न सकिने तिन बेबी प्रोडक्ट ?
बृद्धहरुलाई जंगलमा मर्नको लागि छोडिने उबासुते प्रथा।